Isisulu sokudlwengulwa siphilisa imiphefumulo ngomculo waso | Scrolla Izindaba
Isisulu sokudlwengulwa siphilisa imiphefumulo ngomculo waso
UGabisile unikeza uthando, ukunakekela nokuthula ezinganeni eziningi zaseTembisa namaphethelo.
Ngaphandle kokunakekela izintandane nezingane ezikhubazekile, usabalalisa umyalezo wothando. Ufundisa abantu ngokuxoxa udaba lwakhe lokusinda ngomculo.
UGabisile Khoza ungumculi we-Afro-jazz, umaskandi kanye nomculo wokholo futhi unezwi legolide. Uthe:
• Ngiphulukisa imiphefumulo elimele emhlabeni ngomculo wami.
• Ngilwa nokungabi nabulungiswa futhi ngiletha ukuqwashisa ngomculo wami.
• Ngiyagqugquzela ngomculo wami.
• Ngicula ngempilo yami.
• Ngishumayela ngothando kanye nokuzwana emculweni wami.
Uthe, ngesikhathi esakhula wayejwayele ukulingisa uBrenda Fassie kwaze kwafika la abantu nabo base bembiza ngaye uBrenda.
Kodwa ngesikhathi enandisa eMelika, abantu bamtshela ukuthi umculo wakhe uzwakala ufana kakhulu nokamama ongasekho uMiriam Makeba.
UGabisile oneminyaka engama-52 uthe, waqala umsebenzi wakhe esemusha enandisa emicimbini yasesontweni, emingcwabeni nakweminye imicimbi.
“Ngalezo zinsuku, abantu babevame ukungitshela ukuthi ngelinye ilanga ngizophumelela ngibe umculi owaziwayo.”
Ngesikhathi kuwumvalelo, uGabisile ukhiphe ingoma ethi-E’bredella.
Le ngoma i-E’bredella ihlose ukukhuthaza abantu ukuthi bahlale benethemba phakathi kwalobunzima obufike nobhubhane.
“Abantu babhekene nezinselelo zezezimali, ubunzima emishadweni, ukugula kanye nokushona. Kodwa ngaphandle kwezivunguvungu zempilo, ingoma yami ikhuluma ngokuzethemba, uthando kanye nethemba,” kusho uGabisile.